Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa kor u qaada wax soo saarka dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah masiibada COVID-19 | Micomme
Iyada oo ay ku soo badanayaan baahiyaha shisheeye inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19, soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa kordhinaya wax soo saarka si ay ugu fidiyaan sahayda dalal kale.
Ventilator waa nooc ka mid ah qalabka gargaarka neefsashada. Shaqada caalamiga ah ee xakameynta masiibada, waxyaabaha ugu badan ee loo baahan yahay waa maaskaro caafimaad, dhar ilaalin ah iyo is-qurxin.
Xogta laga helo shirkadda xog-ururinta iyo falanqaynta GlobalData waxay muujineysaa in intii lagu guda jiray masiibada guud, qiyaastii 880,000 hawo-mareennada loo baahdo adduunkoo dhan, halka Mareykanka uu u baahnaa 75,000 hawo-mareeno, halka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Spain, iyo Boqortooyada Ingiriiska ay lahaayeen wax kayar 74,000 hawo-mareeno. . Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa hadda shaqeynaya saacad kasta si ay taageero ugu siiyaan waddamada kale ee si degdeg ah ugu baahan hawo-mareenada iyaga oo hubinaya sahayda guriga.
Micomme, oo ah soosaarayaasha qalabka neefsashada, waxay amarro ka heshay ilaa 20 dal iyo gobollo, waxayna gaarsiisay in ka badan 1,000 hawo-mareenada duulaya. Jadwalka shaqada ee amarada ganacsiga ee ay saxiixday ayaa loo habeeyay illaa dhamaadka xagaaga. Isla sidaas ayaa ay u tahay shirkadaha kale oo dhan. In Panama,Qulqulka sare ee dareeraha 'sannu cannula aaladda daaweynta oksijiinta' ayaa lagu rakibay cusbitaalka. Qaybiyeyaashayada ayaa bixiya tababar rakibaadda shaqaalaha caafimaadka ee safka hore. Waad ku mahadsantahay dhamaan shaqaalaha caafimaadka geesinimadaada iyo dadaalkaaga. Waxaan ku faan nahay inaan ku aragno in masiibada guud, dhammaan shaqaalaha micomme ay u wada istaagaan si ay ula dagaallamaan fayraska.